ray | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းကော်မတီ, Kardemir ၏ဦးခေါင်းကို
ကာကွယ်ရေးစက်မှု, Karabükသံနှင့်သံမဏိကုမ္ပဏီ (Kardemir) မှသမ္မတအိမ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အဖြစ်လေ့လာတွေ့ရှိချက်ကိုဖန်ဆင်း .. KARDEMİR INC ။ , ကာကွယ်ရေးစက်မှုကျယ်ပြန့်ပါဝင်မှုနှင့်အတူသမ္မတတစ်ဦးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကျင်းပခဲ့သည်။ Kardemir ကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက် [ပို ... ]
တူရကီKarabükသံနှင့်သံမဏိအလုပ်လုပ် (KARDEMİR) INC ပစ်ချပထမဦးဆုံးအကြီးစားသံနှင့်သံမဏိစက်မှုလုပ်ငန်း၏အမြစ်အောက်မှာနှစ်တွင် "အမျိုးသားရေးစက်မှု drive ကို" တွင်စတင်ခဲ့ပြီးသောဂရိတ်ခေါင်းဆောင် Mustafa Kemal Ataturk xnumx'l သမ္မတနိုင်ငံကိုတည်ထောင်သူ။ , [ပို ... ]
narlıdere Metro ရထားအကျပ်အတည်းအတွက်
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl 1 milyar 27 milyon lirayla Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş’ye ihale ettiği Narlıdere Metrosu’nda şimdi de ray krizi patlak verdi. EGELİ SABAH‘dan Ercan [ပို ... ]
သူကအစ္စတန်ဘူလ်လမ်းDüzceမြူနီစီပယ်၏ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းဘို့အလုပ်လုပ်စတင်ခဲ့သည်။ သိပ္ပံစက်မှုနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးနှင့်Düzceမြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာxnumx.hükümet အဆိုပါအစ္စတန်ဘူလ်လမ်းစီမံကိန်း၏မကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း၏ Faruk ထိရောက်သောနယ်ပယ် [ပို ... ]
ရုရှား၌ပြိုကျ Culvert, ကျောက်မီးသွေးရထားလွဲသွား loaded
အဆိုပါမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ဒါဟာရုရှားမှာကျောက်မီးသွေးတင်ဆောင်တဲ့ culvert ကုန်တင်ရထား၏ပြိုကျသဖြင့်လွဲချော်ရပ်တန့်ခဲ့သည်။ ကြောင့်ကြောင့်ကျောက်မီးသွေးတင်ဆောင် Siktivkar ကုန်တင်ရထားထဲမှာအလွန်အကျွံရွာသွန်းဖို့ culvert ၏ပြိုကျ၏ရလဒ်မှရုရှားအဘိဓါန် Komi သမ္မတနိုင်ငံ [ပို ... ]
Bursa လျှပ်စစ်မီးရထားအထက်တန်းမြန်နှုန်းရထားဆိုက်ရောက်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေ7နှစ်ပေါင်း
Ya 1990 ya 1991 yılıydı. Bursa Hakimiyet’in Fomara Han’daki binasında çalışırken, bir tren kazasına gitmiştik. Kaza; Bursa’nın Kütahya sınırındaki Harmancık’a bağlı Gökçedağ’daydı. Hatırladığımız kadarıyla; Kara tren, raydan çıkmış, trende bulunan [ပို ... ]
မီးရထားအလုပ်သမားများ '' ဒါဟာအလုပ်လုပ်ဘယ်လို
09 / 07 / 2019 Levent Ozen 0
Demiryolu işçiliği dünyanın en zor işlerinden birisi olarak kabul ediliyor.Üstünden geçerken o rayların nasıl bozulmadan durduğunu pek farketmeyiz.Litvanya’da o rayların tamir ve bakımını yapan işçilerin zorlu çalışma ortamı ve oldukça [ပို ... ]
သိုး Manisa ရထားရထားရလို Coban ကူးထားပါတယ်
63 ကြိုးစားနေနှစ်အရွယ်သည်သိုးထိန်းဒဏ်ရာရနေစဉ် Manisa, Turgutlu မြို့, ရထားလမ်းဖို့သိုးထဲကယူတဲ့ခရီးသည်ရထားဖြင့်ဝင်တိုက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဖြစ်ရပ်, အမိန့် 11.00 နာရီအတွင်း, Mustafa Kemal ရပ်ကွက်အနီးဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ သိုးထိန်းတို့သည်မိမိတို့၏တိရိစ္ဆာန်များ Hayrettin Ölgeကြောင့်စားကျက်, [ပို ... ]
Karabükသံနှင့်သံမဏိစက်ရုံများ (KARDEMIR)၊ ဆောက်လုပ်ရေးသံ၊ ၀ တ်၊ အပွင့်များ၊ ပရိုဖိုင်း၊ ထောင့်၊ ရထားလမ်း၊ ထူထပ်သောပတ် ၀ န်းကျင်၊ မိုင်းတိုင်၊ ကွိုင်၊ Kardemir ပြည်သူ့ဖွင့်ဟဖော်ထုတ်ခြင်းပလက်ဖောင်း (KAP) ကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည် [ပို ... ]
26 / 05 / 2019 Levent Elmastaş 0
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobil prototipinin bu yılsonuna kadar hazır olacağını ve 2022 yılında da yerli otomobilin yollara çıkmasının planlandığını açıkladı. Türkiye’nin yerli otomobilini üretmek üzere bir [ပို ... ]
တူရကီရဲ့ Kardemir ထူကွိုင်ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları, son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlarla katma değeri yüksek ürünlere yönelen ve kurduğu ray profil haddehanesi ile Türkiye’nin tek ray ve ağır profil üreticisi konumuna geldi. Kardemir, [ပို ... ]
Ankara’nın Sincan ilçesinde akaryakıt taşıyan tren raydan çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, hatta yaklaşık2saat süreyle tren seferleri gerçekleştirilemedi. Edinilen bilgiye göre, saat 01.30 sıralarında Ankara Gar [ပို ... ]